abcnepali | » कृष्ण धरावासीको निबन्ध: इलाम र म ! कृष्ण धरावासीको निबन्ध: इलाम र म ! – abcnepali
abcnepali June 29, 2019
म क्याम्पस पढ्न गएको थिएँ तर कुन विषय पढ्ने भन्ने निधो थिएन । मजस्तै कलेज पढ्न आएका साथीहरूको लस्करमा उभिएर एउटा फारम किनी उनीहरूको जस्तै पारामा धमाधम भरेथेँ । पछि नाम निस्क्यो । मैले त व्यावसायिक शिक्षामा पो फारम भरेँछु १ त्यो विषय त इलाममा दुई वर्ष अर्थात् आईएडसम्म मात्र पढाइ हुँदोरहेछ । दुई वर्षपछि मैले इच्छा नहुँदा नहुँदै पनि इलाम छाड्नु प¥यो । आज सोच्दछु, त्यो दिन म मानविकी पढ्नेहरूको
लस्करमा उभिन पुगेको भए त्यहीँबाट बिए पास गरेर फर्किदो हुँ ।
तर म यी माथिका कुनै कुरा हुन चाहिनँ
९नचाहेको रु कि नसकेकोरु० । मैले त्यहाँबाट आईएड मात्र गरेको र बीएड पढ्न सानोठिमी नगएकोले प्राथमिक स्कुलको मास्टर भएँ । पहिला स्वयंसेवक भएँ किनकि म सबै कुराले परिपूर्ण घरानाको भएको हुनाले स्वयंसेवक शिक्षक बनेँ । केही वर्षपछि कुनै एकजना शिक्षकले त्यही विद्यालयकी विद्यार्थीसँग हृदय जोडेर नफर्किने गरी बाटो लागेपछि उनैको ठाउँमा सट्टा शिक्षक भएँ । उनले जब राजिनामा दिएर महान काम गरेथँे, त्यही ठाउँमा अस्थायी शिक्षक बनेँ । उनलाई मुरीमुरी धन्यवाद ।
नमिल्ने कुरा गर्नु नहुने हो मैले किनकि आईएड पढ्दा पहिला महिनाको डेढ सय र पछि दुई सयका दरले छात्रवृत्ति दिई एउटा फाराममा सही गराइएको थियो । त्यसमा स्पष्ट लेखेको थियो, पढिसकेपछि सरकारी विद्यालयमा अनिवार्यसँग पाँच वर्ष शिक्षण गर्नुपर्ने छ तर सात वर्षसम्म पढाउँदा पनि स्थायी जागिर हुनसकेको थिएन । शिक्षा पढेको मानिस बैङ्कमा जागिर खान जानु नहुने हो नियमले । गए पनि जागिर नदिनु पर्ने हो नियमले तर म बाठो थिएँ । मैले एसएलसीको प्रमाणपत्र मात्र पेश गरेर खरदार हात पारिहालेँ । त्यसपछि मेरो आईएडको प्रमाणपत्र र ज्ञानले कहिल्यै टाउको उठाउनु परेर । ती दुवै भूमिगत भए । म छात्रवृत्ति खाएर शिक्षा पढेको मानिस बैङ्कमा पुगेँ । बैङ्कमा पुगेर साहित्य लेख्न थालेँ । सबैले भ्रष्टाचार गर्न मिल्ने देशमा मैले मात्र किन नमिल्नु १
त्रिचालिस सालतिर बैङ्कको जागिरको सिलसिलामा फेरि एकपल्ट इलाम पुगेको थिएँ । त्यसबेला इलाम पहिलाकोभन्दा धेरै अर्कै भएको थियो तर चियाबारी उस्तै थियो, चियाबारी मास्तिरको केबी गुरुङको घर उस्तै थियो । पारि शान्तिडाँडा, सोयाक, उता माथि माइपोखरी, पारि नाम्सालिङ, नयाँबजार सबै पहिलेकै जस्ता थिए टाढाबाट हेर्दा तर भित्र जाँदा ती अर्कै छन् भन्थे । म आफू अर्कै भएकोमा खुसी थिएँ तर अरू चाहिँ नबदलिएको भा हुने भन्ने लागिरह्यो । आफूले मात्र जे पनि हुन पाको पो मज्जा । अरूको पनि प्रगति भएको देख्नु के मज्जा रु